Hichapụ Photos / ihe Album si iPad / iPad Obere
Olee otú Hichapụ Photos / ihe Album si iPad / iPad Obere / iPhone
Amaghị otú ka ihichapụ foto site na iPad / iPad Obere / iPhone? Nke ahụ bụ otu ihe iseokwu bụghị nanị ewute gị ma ọtụtụ ndị mmadụ. M na hụrụ na e nwere ọtụtụ posts na discussions.apple.com ekwurịta banyere otú ka ihichapụ foto site na iPad / iPad Obere / iPhone. Ụfọdụ ndị na-ekwu na ọ dịghị trashcan ka ihichapụ a foto. Ụfọdụ ndị kwuru na Hichapụ button bụ ma isi awọ ma ọ bụ ọbara ọbara, ọ bụghị ekwe ka ndị ọrụ na-ewepụ foto site na iPad / iPad Obere / iPhone. N'eziokwu, e nwere ọtụtụ ụzọ ka ihichapụ foto site na iPad / iPad Obere / iPhone. Ị nwere ike ịlele si na-esonụ ụzọ iji nweta ihe mgbaru ọsọ gị.
Ihichapụ foto na Wondershare TunesGo (desktọọpụ software)
Ihichapụ foto manaully
Ihichapụ foto na iTunes
Ihichapụ foto na iji eriri USB
Hichapụ iPad / iPad Obere / iPhone weghaara photos
Hichapụ iTunes dị foto site na iPad / iPad Obere / iPhone
Hichapụ foto site na Photo Stream on iPad / iPad Obere / iPhone
Hichapụ Photo albums si iPad / iPad Obere / iPhone
Wondershare TunesGo bụ ihe nile-na-otu ihe ngwọta na-enye gị ohere ka ihichapụ bụla na-achọghị foto na iPad / iPad Obere / iPhone Igwefoto Roll (iPad weghaara photos), iPad Photo Library (dị si iTunes), na Photo Stream. Na ọ na-enyere ndị ọrụ ka ihichapụ a ụyọkọ photos oge ọ bụla. Agbanyeghị, ka ihichapụ foto site na iPad mfe na lorịị, Wondershare TunesGo bụ gị nhọrọ kasị mma.
Ngwọta 1: All-na-otu Ngwọta iji Hichapụ Photos N'ebe nile si iPad / iPad Obere / iPhone
Hichapụ Photos na iPad Igwefoto Roll, Photo Library na Photo Stream;
Wepụ foto albums si iPad enweghị a ikedo;
Ndabere foto site na iPad na kọmputa ma ọ bụ mpụga ike mbanye;
Mepụta foto ọhụrụ albums na mbubata foto site na a na kọmputa na-iPad;
Download Wondershare TunesGo ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Mac) na wụnye ya na kọmputa gị. Jiri gị eriri USB jikọọ gị iPad gị na kọmputa na ẹkedori Wondershare TunesGo. Ọ ga-achọpụta rụọ gị iPad na gosipụta iPad na ya isi window.
Nzọụkwụ 2. Nhichapụ foto site na iPad / iPad Obere / iPhone
Pịa "Photos" taabụ na ekpe sidebar. Nke a na-elu foto management window. Na mgbe ahụ i kwesịrị pịa "Igwefoto Roll", "Photo Library", ma ọ bụ "Photo Stream" na-emeghe foto kwekọrọ ekwekọ gallery. Họrọ gị achọghị photos na pịa "Hichapụ". Ọ na-ewe gị ole na ole nke abụọ iji wepụ foto ndị si gị iPad. Ihichapụ otu foto album si gị iPad, nri-pịa foto album na pịa "Hichapụ". Ntak download Wondershare TunesGo (Windows) ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Mac) nwere na-agbalị ugbu a?
Ngwọta 2: aka-ewepụ foto site na iPad / iPad Obere / iPhone
Ngwọta 2-1: aka-ewepụ weghaara foto na foto na Photo Stream si iPad / iPad Obere / iPhone
Ọrụ nwere ike ihichapụ foto na na iPad / iPad Obere / iPhone aka. Otú ọ dị, photos nwere ike ehichapụ aka-na na-ndị a ị na iwere na gị iPad ndị a na gị Photo Stream. Lee ndị nzọụkwụ wepụ iPad weghaara foto na foto na Photo Stream.
Nzọụkwụ 1. Kpatụ Photos ngwa gị iPad.
Nzọụkwụ 2. Kpatụ foto ma ọ bụ Photo Stream taabụ na n'elu nke window.
Nzọụkwụ 3. Kpatụ oyiyi ị chọrọ ka ihichapụ na enweta na "Hichapụ" ma ọ bụ "ahịhịa nwere ike" 'akara ngosi.
Ngwọta 2-1: Hichapụ foto site na iPad / iPad Obere / iphone aka
Emmanuel nwe nwere ike ihichapụ foto kpọmkwem site gadget. A ngwọta ga na-ihichapụ photos na e weghaara eji gị gadget, otú e nwere ma na gị 'Igwefoto Roll' nchekwa ma ọ bụ na gị 'Photo Stream'. N'okpuru ebe a bụ nzọụkwụ site nzọụkwụ ngwọta ka ihichapụ foto gị 'Igwefoto Roll' na 'Photo Stream'
Nzọụkwụ 1. ẹkedori Photos ngwa gị iPad
Họrọ photos nchekwa ebe foto na ị chọrọ ka ihichapụ na, ọ ga-abụ 'Igwefoto Roll' ma ọ bụ 'Photo Stream'
Nzọụkwụ 2. Họrọ foto ị chọrọ ka ihichapụ
Kpatụ họrọ button mere na ọ-enye gị ohere ịhọrọ ihe karịrị otu foto, anya maka photos na ị chọrọ Hichapụ.
Nzọụkwụ 3. mgbata 'Nhichapụ'
Ngwọta 3: Hichapụ niile iTunes dị foto site na iPad / iPad Obere / iPhone na iTunes
Ụfọdụ ndị kwuru na photos synced n'elu na iTunes (ma ọ bụ iTunes dị) can'te-ehichapụ on iPad. Nke ahụ bụ eziokwu. E nweghị nhọrọ na ihe iPad ikwe ka ihichapụ ụdị photos. Ka ihichapụ foto ndị a, ị kwesịrị ị ma na-agbalị ngwọta 1 ma ọ bụ site na gị iTunes na kọmputa gị. N'okpuru ebe a bụ nzọụkwụ Iji hichapụ ihe niile iTunes dị photos site na iPad na iTunes.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iPad gị na kọmputa site na eriri USB na ẹkedori iTunes.
Nzọụkwụ 2. Pịa gị iPad na ị pụrụ ịhụ akara panel maka iPad. E nwere taabụ aha dị ka "Photos". pịa ya.
Nzọụkwụ 3. Akọrọ "mmekọrịta Photos si" ma họrọ otu folda na kọmputa gị. Pịa "Mee" na-amalite mmekọrịta.
Ngwọta 4: Hichapụ photos na iji eriri USB
N'ezie, Apple-enye gị ohere ka ihichapụ foto na ị iwere na iPad site na kọmputa mfe. Ihe niile ị chọrọ ime bụ plọg n'ime eriri USB kọmputa. Soro mfe nzọụkwụ n'okpuru.
Nzọụkwụ 1. Jiri eriri USB jikọọ gị iPad gị na kọmputa.
Nzọụkwụ 2. The kọmputa ga-chọpụta gị iPad na mgbe ahụ efego gị iPad dị ka a mbughari disk mbanye.
Nzọụkwụ 3. Chọta gị iPad na kọmputa gị. Emeghe ya na pịa esịtidem nchekwa> DCIM. Foto niile ị na-na-echekwa n'ebe ahụ. Họrọ gị unwnanted foto na ihichapụ ha.
iPad File Manager: Jikwaa faịlụ gị iPad Ọfọn
> Resource> iPad> Olee otú iji Hichapụ Photos / ihe Album si iPad / iPad Obere